This is the photo title
ကျွန်တော်တို့၏ စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)ကို မိတ်ဆက်ခွင့်ရရှိတဲ့အတွက် လွန်စွာ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သင်တန်းကျောင်းအပေါ်စိတ်ဝင်စာပြီး ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုကြသူ တစ်ဦးချင်းစီကိုလည်း လှိုက်လဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအနေဖြင့် သင်တန်းသားများကို အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှု ပြည့်ဝစွာဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းဟာ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်မည့်သူများကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးသည့် ကျောင်းဖြစ်၍ သင်တန်းများတွင် စာတွေ့ကို ၃၀% နှင့် လက်တွေ့ကို ၇၀% အချိုးဖြင့် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါတယ်။
တက်ရောက်သင်ကြားနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်အနေဖြင့် Mechainical Draughtsman Course, Conventional Machine Tool Operator Course, CNC Machine Tool Operator Course, Electrical Fitter Course နှင့် Welding, Electro-plating & Surface Treatment Course ဟူ၍ ဘာသာရပ်(၅)ခု ရှိပါတယ်။ သင်တန်းကျောင်းမှ နှစ်စဉ် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား (၂၅၀)ဦးခန့်ကို မွေးထုတ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ အခြားသိရှိလိုသည်များ ရှိပါက Contact Us မှတဆင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်။
အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) သမိုင်းအကျဉ်း
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့ကို Institute of Planning and Project Research-IPPR Engineering International အဖွဲ့အစည်းက စက်မှုဝန်ကြီးဌာနနှင့် အတူ ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ (၂၉-၁၀-၂၀၀၈) ရက်နေ့တွင် လွှဲပြောင်းလက်ခံခဲ့ပြီး အမှတ်စဉ်(၁) သင်တန်းကို (၁၆-၁၀-၂၀၀၈)နေ့၌ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနည်းပြ (၄၃)ဦးကို တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ ကူမင်းမြို့ရှိ ကူမင်းသိပ္ပံနှင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်တွင် (၅)လကြာ နည်းပညာသင်တန်းများ လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ပါသည်။
အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)သည် တရုတ်ယွမ်ငွေ သန်း(၃၀)နှင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ စိုက်ထုတ်ငွေ (၄၇၄၅.၈)ကျပ်သန်း ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ဒေါနဘွားရပ်ကွက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျက်ရှိသော သင်တန်း(၆)မျိုးရှိပြီး သင်တန်းကာလမှာ (၁)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်းအမည်နှင့် သင်တန်းသားအရေအတွက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -
၁။	စက်မှုပုံဆွဲသင်တန်း (Mechanical Draughtsman Course) - ၃၀ ဦး
၂။	စက်ခုတ်စားမှုစက်ကိရိယာများ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်မှုသင်တန်း (Conventional Machine Tool Operator Course) - ၃၀ ဦး
၃။	ကွန်ပျူတာသုံး စက်ခုတ်စားမှုစက်ကိရိယာများ ကိုင်တွယ်မောင်းနှင်မှု သင်တန်း (CNC Machine Tool Operator Course) - ၃၀ ဦး
၄။	လျှပ်စစ်ပညာသည် သင်တန်း (Electrical Fitter Course) - ၃၀ ဦး
၅။	ကွန်ပျူတာနှင့် ကွန်ပျူတာသုံး ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုသင်တန်း (Computer and CAD/CAM Course) - ၃၀ ဦး
၆။	ဂဟေဆော်ခြင်း၊ မျက်နှာပြင်အရောင်တင်ခြင်းနှင့် အမာတင်သင်တန်း (Welding, Electro-plating & Surface Treatment Course) - ၃၀ ဦး
သင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့
သင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ကျောင်းအုပ်၊ အုပ်ချုပ်မှုထာနမှူး၊ သင်တန်းအလိုက်ဌာနမှူးများ စသည်ဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သင်တန်းကျောင်း၏ ဘက်စုံဖွံဥ ဖြိုးရေး၊ သန့်ရှင်းလှပရေး သင်တန်းသားများ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး စသည့်တာဝန်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီများမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ
မထမတန်း ဝဲမှ ယာ - ဦးတင်အေး၊ ဦးလှဌေး၊ ဦးတင်အောင်၊ ဦးထိန်လင်းဦး
ဒုတိယတန်း ဝဲမှ ယာ - ဒေါ်စံပယ်ဦး၊ ဒေါ်ခင်မွေးရီ၊ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဆွေ ဒေါ်မေလှမြိုင်
အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး)၏ တည်နေရာ
1. Mechanical Draughtsman Course
2. Conventional Machine Tool Operator Course
3. CNC Machine Tool Operator Course
4. Electrical Fitter Course
5. Welding, Electro-plating & Surface Treatment Course